Umaki: ikhasi lemiphumela yenjini yokusesha | Martech Zone
Umaki: ikhasi lemiphumela yenjini yokusesha
Ungawabona Kanjani Amathuba e-SEO Esizeni Sakho Ukuthuthukisa Ukusekwa Emiphumeleni Yokucinga Usebenzisa iSemrush
ULwesihlanu, February 19, 2021 NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2021 Douglas Karr
Eminyakeni edlule, ngisize amakhulu ezinhlangano ngokwakha amasu wazo wokuqukethwe nokwenza ngcono ukubonakala kwazo zonke izinjini zokusesha. Inqubo iqonde ngqo phambili: Ukusebenza - Qinisekisa ukuthi indawo yabo isebenza kahle maqondana nejubane. Idivayisi - Qinisekisa ukuthi ulwazi lwabo lwesayithi luphakeme kudeskithophu futhi ikakhulukazi kuselula. Ukufaka uphawu lwentengiso - Qinisekisa ukuthi isayithi labo liyakhanga, lisebenziseka kalula, futhi lifakwa uphawu njalo ngezinzuzo nangokuhlukaniswa kwazo. Okuqukethwe - Qinisekisa ukuthi banokuqukethwe
Izincwadi zihlala zinenzuzo yokugoqa izihloko zazo nezihloko ngezithombe noma izincazelo ezinamandla. Endaweni yedijithali, lezo zinto zokunethezeka kaningi azikho. Okuqukethwe kwawo wonke umuntu kubukeka kufana kakhulu ku-Tweet noma Umphumela Wenjini Yokucinga. Kumele sibambe ukunakwa kwabafundi abamatasa kangcono kunabantu esincintisana nabo ukuze bacindezele futhi bathole okuqukethwe abakufunayo. Ngokwesilinganiso, abantu abaphindwe kahlanu kunabo bonke abafunda izihloko eziyinhloko njengokufunda ikhophi yomzimba. Nini
Abacwaningi Babona Futhi Bachofoze Kanjani Emiphumeleni Yokucinga ye-Google
NgoMsombuluko, Mashi 7, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Abaseshi babona kanjani futhi bachofoze kanjani kumiphumela ye-Google ekhasini le-Search Engine (SERP)? Kuyathakazelisa ukuthi akukashintshi kangako eminyakeni edlule - inqobo nje uma kungumphumela wemvelo kuphela. Kodwa-ke - qiniseka ukuthi ufunde iphepha elimhlophe le-Mediative lapho beqhathanise izakhiwo ezahlukahlukene ze-SERP nemiphumela ngaphakathi ngakunye. Kunomehluko obonakalayo lapho i-Google inezinye izici ezifakiwe ku-SERP njengama-carousels, amamephu, nolwazi lwegrafu yolwazi. Phezulu
NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2009 ULwesihlanu, February 10, 2017 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende ami lifonele ngesonto eledlule labuza ukuthi kungani, lapho lisesha, isiza salo sasiqala ukukleliswa kodwa omunye umuntu wamfaka phansi ekhasini kancane. Ukube ubungayizwanga i-ruckus, i-Google ivule imiphumela yosesho eyenziwe yaba ngeyakho unomphela. Lokho kusho ukuthi ngokuya ngomlando wakho wosesho, imiphumela yakho iyohluka. Uma uhlola indawo yakho yamasayithi, cishe uzothola ukuthi konke sekuthuthuke kakhulu. Noma kunjalo, cishe kuphela